Soo-saaraha Sodium Hyaluronate, warshad Hyaluronic Acid, soo-saaraha hyaluronan - AWA
Honor Oo Aqoonta
WAA MAXAY SODIUM HYALURONATE
Sodium hyaluronate waa cusbo ka timid hyaluronic acid, oo leh miisaanka molikalikada ah laga bilaabo 3000Da ilaa 2500KDa iyo CAS no. 9067-32-7. Waa polymer mucopolysaccharide oo si isdaba joog ah ay ugu xiran yihiin unugyada N-acetylglucosamine iyo D-glucuronic acid disaccharide. Waxay si dabiici ah u joogtaa maqaarka, indhaha, kala-goysyada, iyo xubnaha kale iyo unugyada isku-xidhka. Waxaa la ogaaday in sodium hyaluronate uu leeyahay shaqooyin badan oo jir ahaaneed, sida kaqeybgalka huurinta, saliidaha, bogsashada dhaawaca, hagaajinta unugyada, dib u soo cusbooneysiinta, jawaabta bararka, koritaanka uurjiifka, iwm.
Sodium hyaluronate waxaa si weyn loogu isticmaalaa wax soo saarka cuntada, waxyaabaha la isku qurxiyo, iyo dawooyinka. Ammaankiisa waa la xaqiijiyay, umana badna inay sababto falcelin xasaasiyadeed maxaa yeelay si dabiici ah ayaa loogu qaybiyaa jidhka bini aadamka. Waxaa jira laba qaab oo loo soo saaro soodhiyamka soodhiyam, ka soo saaridda digaagga digaagga, iyo halsano bayooloji. Waxaan u isticmaalnaa halsano bayooloji, oo aan lahayn GMO, oo aan lahayn ilo xayawaan.
Systeam tayo leh
> COLMETIC GRADE sodium hyaluronate
Sodium hyaluronate waa qaybta ugu weyn ee unugyada isku xidha sida maaddada bini aadamka, jirka, iyo dareeraha synovial. Waxay leedahay howlo badan oo jir ahaaneed. Markay yaraato, xanuunku wuu yimaadaa. Markaa dadku waxay u isticmaalaan inay ku daaweeyaan ophthalmic iyo cudurada wadajirka ah, duuduubyo jilicsan, bogsashada nabarada, iwm.
> CUNTADA GRAD sodium hyaluronate
Sodium hyaluronate ayaa si dabiici ah loogu qaybiyaa jidhka bini-aadamka, taas oo yaraata inta waqtigu socdo. Waxaa la caddeeyay inay dadku heli karaan sodium hyaluronate markay cunayaan. Waxay noqotaa mid aad u caan ah oo dadku caan ku yihiin nafaqada si ay kor ugu qaadaan caafimaadka. Waxay badanaa la socotaa fiitamiinno, chondroitin sulfate, iwm.
Oligo sodium hyaluronate waa badeecad cusub oo ay soo saartay tikniyoolajiyadda xaalufinta bio-enzymatic. Miisaankiisu waa 3,000Da-10,000Da, oo si fudud ay u soo jiitaan jidhka aadanaha oo leh saameyn qoyaan-qoto dheer.
Sodium hyaluronate ayaa si weyn u wanaajin kara jiritaanka noolaha daawooyinka iyada oo loo sii marayo jir ahaan, xuubka xuubka, iyo isku darka daroogada. Faa'iidooyinkeeda ayaa aan u dhigmin qalabka kale ee polymer. Waxaa sidoo kale lagu beddeli karaa isku-xirka iyo dib-u-habeynta si loogu dheereeyo waqtiga haynta isha isla markaana ay sii kordhiso bioavቭ ee daroogada.
In-cosmetic Paris Paris 2019
Shahaadooyin la cusbooneysiiyay
XIDIGTA XAALADA 2020.8
BEACH TEAM-DHAQANKA 2020.7
SHANDONG AWA BIOPHARM CO., LTD. waxaa la aasaasay July 15, 2010. Shirkadda ayaa hadda leh hanti guud oo ku dhow 100 milyan yuan, in ka badan 100 shaqaale ah. Awoodda sanadlaha ah waa qiyaastii 130MTs hadda, oo ay ku jiraan 100MTs is qurxinta iyo heerka cuntada HA, 20MT of oligo HA, 10MT oo ah isha isha dhibcaha HA iyo 3MTs ee duritaanka darajada HA. Iyada oo la adeegsanayo tikniyoolajiyada soosaarka horumarsan, tayada waxsoosaarka sare, iyo adeegga iibka aad u wanaagsan ka dib, waxaan ku guuleysanaa sumcad wanaagsan iyo aaminaada macaamiisha.
10 sano dadaalkii weynaa kadib, waxaan ku taxnay liiska seddexda gudoomiye (Code Code: 832607) waxaan helnay shahaadooyin iyo aqoonsiyo badan, sida ISO9001, DMF, NSF, KOSHER, HALAL, ECOCERT, COSMOS, Liisanka Waxsoosaarka Maandooriyaha, Shahaadada Sare. Ganacsiga teknolojiyada, iwm Erey adag, mustaqbal ifaya ayaa yimaada.
Shirkadaha Fiidiyowyada Shirkadda
NO.488 Huanghe12 Road, magaalada Binzhou, ShandongProvince, Shiinaha
heerka fasalka Cunnada
qurxinta HA Isha
dhibicda darajada HA
Dhibaca darajada HA
Dib u bilaw wax soo saarkii 2020.8
Dhismaha koox xeebta 2020.7
Shahaadooyinka la cusbooneysiiyay (2020/6/23)
COA Dib Statement
Bayaanka Isbedelka LOGO
Oligo sodium hyaluronate , Indhaha lagu dhibciyo hyaluronate sodium fasalka, Duro sodium fasalka hyaluronate